Funda ukuThengiswa koSuku kwaye ube yiPro | Isikhokelo esipheleleyo kaJanuwari 2022
Unokuba nguMrhwebi woSuku kunye neNzuzo NjengePro ngo-2021!
Ukurhweba ngamasheya kusetyenziswa njengendawo ekuthengiswa kuyo iifemu zabarhwebi, izindlu zorhwebo namanye amaziko ezezimali. Ezo zinto zazizizo kuphela ezazinokufikelela kwangoko kulwazi ngendlela izitokhwe ezazisebenza ngayo ngalo lonke usuku lokurhweba.
Nangona kunjalo, namhlanje, ngokusungulwa kwe-intanethi kunye neewebhusayithi zorhwebo lwesitokhwe, kuye kwaba lula kubarhwebi ukuba bathathe inxaxheba kukhawuleziso lokuthengisa emini.
Ukuthengisa kwemini kuchazwa njengenkqubo yokuthenga nokuthengisa iiasethi kusuku olunye lokuthengisa. Utshintshiselwano lwenziwa ngenjongo yokwenza inzuzo kwintengiso. Njengoko kubonakala, kurhwebo losuku, awunakubambelela kwiasethi ngaphezulu kosuku olunye.
Kodwa, rhoqo, abathengisi bagcina indawo ivulekile kuphela iiyure ezimbalwa okanye imizuzu. Ke ngoko, inzuzo isekwe kumaxabiso amancinci okwahlukileyo kwaye ihlala iququzelelwa ngumgangatho.
Kwi-novice, ukuzama ukufunda ukuthengisa kwemini kunokuba ngumceli mngeni omncinci. Ukukunceda ukuba uyiqonde ngcono le ngcamango, senze isikhokelo esicacileyo malunga nokuba loluphi usuku lokuthengisa kwaye ungaqala njani namhlanje!
Funda ngokuThengisa ngemini - iziseko?
Ukophula umxholo, ukurhweba ngemini yindlela yokutyala eqikelelweyo equka ukuvulwa kunye nokuvalwa kwesithuba kwisithuba sosuku.
Makhe siqwalasele umzekelo okhawulezayo. Ukuba uvula urhwebo olutsha nge-11 kusasa kwaye uluvale ngo-2 emva kwemini kwangolo suku, ke, kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo, ulugqibile urhwebo losuku. Ukuba uvala indawo enye ngentsasa elandelayo, ithiyori, ayizukuphendula ngorhwebo losuku.
Olu hlobo lorhwebo lunokuqwalaselwa ngokuchasene ngqo notyalo mali kwisitokhwe. Endaweni yokubambelela kwiiasethi ezinje ngesitokhwe kunye neebhondi iminyaka eliqela, kule meko, abarhwebi bajonge ikakhulu ekwenzeni inzuzo encinci ngexesha elifutshane.
Oko kwathiwa, umrhwebi wosuku angabeka amakhulu emisebenzi ngosuku ngalunye. Kumtyali mali onobuchule, ezi nzuzo zincinci zinokukhawulezisa zidibanise isixa esikhulu kunye nesicwangciso esifanelekileyo esikhoyo. Basebenzisa uphando lobuchwephesha kunye nemibono yokurhweba ukwenza inzuzo ngexesha elifutshane. Oku kuhlala kubandakanya ukusebenzisa umda ukukhulisa amandla okuthenga abarhwebi- oko kubalulekile xa unika usukelo lweethagethi ezincinci.
ULungiselela njani ukuThengiswa kweSuku
Ukuze ufunde ngempumelelo ukurhweba ngemini, kuya kufuneka ukuba uxhobise ngolwazi lokuba isebenza njani imarike. Kufuneka kwakhona kubekho isicwangciso esinceda ukuba uthathe isigqibo malunga nendlela yokulawula imali kunye neeparameter ezahlukeneyo zokuthenga nokuthengisa iiasethi.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba nomrhwebi onamava ngamanye amaxesha uya kujongana nelahleko ebaleni. Ukutsho oko, amava abo kushishino aya kubaxhobisa ukuba bajongane neziphumo zelahleko enjalo. Ngelixa, kulapho ii-novices zisokola kakhulu.
Nangona kunjalo, inyathelo lokuqala lokungena kwindawo yokuthengisa yosuku kukufumana umthengisi we-Intanethi olawulwayo. Oku kuya kukunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali ukuze uthengise ngazo. Oku kunokuba yiyo nayiphi na into evela kwioyile, ii-indices, igolide, istokhwe, ii-ETFs, kwaye, kutshanje, ii-cryptocurrensets.
Xa uyazi ukuba yeyiphi i-asethi ofuna ukuyithengisa, umsebenzi wakho olandelayo uqikelela ekuhambeni kwexabiso elizayo. Ukuba wenza uqikelelo ngokuchanekileyo, uza kwenza imali. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka ufumane indlela yokuthwala ilahleko, kwaye emva koko, uye kwintengiso yakho yosuku olulandelayo.
Izibonelelo zorhwebo losuku
Ukuba uphumelele, kunokwenzeka ukuba ufumane inzuzo enkulu yemali
Ukufikelela kumawakawaka eemarike
Ukufumaneka okufumanekayo ukurhweba ngaphezu kwe-akhawunti yakho
Ukhetho lokurhweba ixesha elide nelifutshane
Zininzi iindlela zokuhlawula ukufumana imali kwi-broker
Ukuthengisa okukhuselekileyo kunye neeapps ezihambayo
Yintoni omele uyiqwalasele
Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka ukuba ulungele ukujongana nokusingatha iimpembelelo zorhwebo olungahambi kakuhle.
Ihlabathi lokurhweba ngemini liyakhawuleza, kwaye lifuna ukuqonda okuqinisekileyo kweemarike. Kodwa njengoko besitsho, akukaze kube semva kwexesha ukuba ufunde ukuthengisa kwemini- yiyo loo nto siqulunqe esi sikhokelo sibanzi!
Izinto ezisisiseko zoRhwebo lweSuku
Ngaphambi kokuba ungene kurhwebo losuku ngemali yokwenene, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzenzile.
Ulwazi olunzulu ngolwazi lwemihla yokuthengisa kunye nohlalutyo lobugcisa
Isicwangciso onokuthi usisebenzise, ​​esingqineke siphumelele
I-simulator yokuthengisa yosuku enokukunceda ufumane ubungqina benzuzo
Kweli candelo, siza kungena kuhlalutyo oluneenkcukacha lwezinto ezisisiseko ukuze ufunde ngokurhweba kwemini ngokulula.
Ukurhweba ixesha elide vs.
Kwimeko yesiqhelo, ufumana ukhetho olunye-ucinga ukuba izabelo zenkampani ziya kunyuka ngexabiso kwaye zityala imali kuzo. Ngale ndlela, ungathengisa kwaye uvune inzuzo. Kananjalo, xa uthenga isitokhwe ukuze usithengise kamva ngenzuzo, ibizwa ngokuba kukuthengisa okude.
Nangona kunjalo, namhlanje, kukho enye indlela yokuthengisa iiasethi zakho kuqala. Kwinto ebizwa ngokuba "kukurhweba okufutshane," ucinga ukuba iasethi iya kwehla.
Masithi uqikelela ukuba ixabiso le-XYZ lisetelwe ukwehla kwiiyure ezimbalwa ezizayo.
Uvula urhwebo lwakho ngokubeka iodolo yokuthengisa. Ukuba uthengisa ii-XYZ ezingama-500, iakhawunti yakho iya kubonisa kwangoko -500.
Ukuba kukho ukwehla nge-5%, xa uyithenga kwakhona, wenza inzuzo. Ukuba akukhange kubenjalo, iakhawunti yakho iya kuhlala ingekhoyo, iguqulela ukuba ulahlekelwe yimali.
Nangona kunjalo, ngokusebenzisa i-CFD broker elawulwayo, ungasilela kumawakawaka ezixhobo zemali ngokucofa nje iqhosha. Kungenxa yokuba izixhobo zeCFD zilanda umkhondo weasethi-eyenza ukuba ibe yeluncedo kakhulu kubarhwebi bemini!
Ukurhweba ixesha elifutshane
Njengoko besitshilo ngaphambilana, ukuthengisa kwemini luhlobo lokurhweba lwexeshana elifutshane elibona abatyali zimali bevala indawo ngosuku olunye. Kwelinye icala lesiphelo, xa utyala imali kwisitokhwe sendabuko ekuhambeni kwexesha, unethemba lokubaleka kumaza okuguquguquka afumaneka kwintengiso.
Ngokwahlukileyo, abathengisi bemini bafuna ukungazinzi kwintengiso, kuphela kwi zabo ubabalo. Ukuthatha ixesha lokuhamba kwamaxabiso asethi, umahluko uza nethuba lokugcina urhwebo luvulekile imizuzu okanye iiyure. Olona tshintsho lwenzeka kwixabiso leasethi, ngosuku, amathuba okuba umrhwebi enze inzuzo.
Umda omncinci, Umthamo oPhezulu
Kuthengiso losuku, ujonge ukwenza inzuzo nakwezona zincinci zomahluko kumaxabiso eeasethi. Oku kunjalo ngakumbi xa uthengisa iiasethi ezinje ngerhasi yendalo, ioyile, igolide, okanye ii-indices. Izitokhwe ezinjalo zihlala zitshintsha kumanqanaba asezantsi.
Ukwandisa inzuzo, ngabathengisi bemini abenza ukubeka imisebenzi emininzi ngalo lonke usuku, nangona, ayizizo zonke ezorhwebo eziya kuthi zibe nenzuzo. Ekugqibeleni, ekupheleni kosuku lokurhweba, ufuna ukufumana inqanaba lokuphumelela elingaphezulu kwe-50%-ubuncinci kwithiyori, kunjalo.
Kungenxa yoko le nto abathengisi bemini kufuneka baqinisekise ukuba basebenzisa izicwangciso eziqinisekisiweyo nezisekwe- esizigubungela apha ngezantsi.
Umrhwebi wosuku unokukhetha ukwamkela isicwangciso esingqineke siphumelele okanye endaweni yoko, siphuhlisa esabo. Ukuba uza kukhetha okwesibini, kuya kufuneka uchithe ixesha elininzi uphanda, uphinde uvavanye kwaye ucoce ngaphambi kokuba ubeke imali yokwenyani kuyo.
Abaqalayo abaninzi bazama ukufunda ukurhweba ngemini ngesicwangciso esiliqili kunye nokuyiqonda ngokufanelekileyo. Njengoko ufumana amava angaphezulu, unokuzama ukongeza owakho ubuqu ukuze usebenze iqhinga lokukunceda.
Nokuba yeyiphi indlela oyikhethayo, kuya kufuneka ujonge ekulandeleni indlela yokusebenza. Ngokwenza njalo, oku kuya kukunceda ukuba uhlakulele urhwebo 'olungqongqo kunye noqeqesho' kwifilosofi ', ​​ngokuchasene nethemba lokufumana inzuzo yomhlaba ngexesha nje lethamsanqa.
Isitshixo kukunamathela kwindlela enye kwasekuqaleni kwaye uyiqonde. Ukuba uzama amacebo ahlukeneyo ngaxeshanye, ngekhe wazi ukuba yeyiphi esebenzayo kuwe kwaye yeyiphi ekubiza imali.
Zeziphi iiasethi onokuthi urhwebe kuzo kwiNtengiso yoSuku?
Umrhwebi wosuku unokufikelela kwizigidi zeeasethi kwiiforamu ezahlukeneyo. Oku kukunika ithuba elihle lokurhweba ngezixhobo ezahlukeneyo zemali nanini na.
Apha ngezantsi sixoxa ngezinye zeasethi ezixhaphakileyo zemali kuthengiso losuku.
Izitokhwe ziinkwenkwezi zokurhweba ngemini. Izabelo zezinye zeeklasi zeeasethi ezinengeniso, njengoko ukungazinzi kuhlala kuhlala kwisalathiso esibanzi. Ukurhweba kwi-Intanethi iisayithi ziya kukunika ukungena kwiimarike zesitokhwe ezinje nge-NYSE, LSE kunye ne-TSE.
Ezinye zazo ziya kubamba iimarike ezingamanzi kancinci. Oku kubandakanya utshintshiselwano olusekwe e-Indonesia, eHong Kong, eMzantsi Afrika, okanye e-Australia.
Izalathiso liqela lezabelo ezizodwa ezibekwa ngamaziko azimeleyo ezemali njengeebhanki okanye iinkampani. Ngamanye amagama, isalathiso sinoxanduva lokulandela umkhondo wentsebenzo yotshintshiselwano ngokubanzi.
I-indice day abathengisi baya kucamngca ngokuhamba kwamaxabiso kwezi zalathiso zesitokhwe- njengoko bebeya kwenza njalo ngalo naluphi na udidi lweeasethi. . Imizekelo ebalaseleyo yee-indices yi-FTSE 100, Dow Jones, kunye ne-NASDAQ 100.
Urhwebo lwempahla luyathandwa kakhulu kubathengisi bemini abanamaxesha. Oko kwathiwa, akukho nto imisa umntu oqalayo ekuthengiseni ezi zinto. Izinto zorhwebo zibandakanya amandla afana neoyile kunye negesi yendalo, isinyithi esinjengegolide, okanye iimveliso zolimo. Iimarike zorhwebo zivulekile iiyure ezingama-24 ngosuku kwaye zinikezela ngeetoni zokuhlawula amatyala.
Eyaziwa njengee-ETFs, olu didi lweeasethi lwenza ukuba abathengisi bakwazi ukuqikelela kwibhasikithi enye okanye yee-asethi ngaphandle kokulandela ubunini. Oku kuthathwa njengokufanelekileyo kubaqalayo, njengoko bebonelela ngobuninzi bobutyebi, umyinge weendleko eziphantsi, kunye nokuninzi kokwahlukahlukana.
I-Forex okanye ukurhweba kwamanye amazwe kukutshintshiselana ngeemali ezimbini ukuze ufumane inzuzo. Ngokungafaniyo nemarike yemasheya, apho uthengisa khona isitokhwe esinye, kwi-forex, uthenga imali enye kwaye uthengise enye.
Njengoko iimali zixabiso ukuya kwinqanaba lesine lokugqibela, nokuba iqhezu lomzuzu lingenza umahluko kumrhwebi. Kananjalo, i-forex ayothusi into yokuba yenye yezona ndawo zidumileyo zokuthengisa ngemini.
Ukongezwa okutsha kurhwebo losuku, urhwebo lwe-crypto lufumana ukwanda okwandayo phakathi kwabatyali mali abanamava. Ngoku ungathengisa iicryptos ezinjengeBitcoin kunye ne-Etherum, ngokuchasene nezezimali ze-fiat.
Gcina ukhumbula ukuba ii-cryptocurrensets zisathathelwa ingqalelo zinobuzaza obukhulu kwaye zinomngcipheko omkhulu, kodwa kwangaxeshanye, zikwazisa ukubakho kwenzuzo enkulu.
Fumana iNiche yakho yokuThengisa
Ngelixa ubukho beempahla ezohlukeneyo ngokungathandabuzekiyo ziluncedo kurhwebo lwasemini, akunakwenzeka ukuba umrhwebi agxile kuzo zonke. Endaweni yoko, ume ithuba elingcono ngokubeka kwindawo enye okanye ezimbini kwaye ugxile kwisicwangciso sakho osikhethileyo.
Kumrhwebi ongahlawulwayo, kubalulekile ukuba uqale uchonge i-niche yakho ukuze ufumane ulwazi kwi-asethi ethile. Umzekelo, ukuba ushenxisa ukugxila kwisitokhwe usiya kwi-indices, emva koko u-crypto, uya kusokola ukufumana ubungcali kwindawo enye yentengiso.
Njengayo nayiphi na enye intsimi, ukugxila kwimpahla enye, ubuncinci ekuqaleni, kuya kuba luncedo- njengoko unokuqokelela ulwazi ngakumbi kwaye uvavanye iindlela zakho. Isenokungabi ngumbono ombi ukufunda ngesixhobo semali xa sele uzithembile kwi-niche enye.
Ukuthengisa kwemihla ngemizekelo
Ngoku sigubungele iziseko zokuthengisa ngemini. Ukukunika ukuqonda okungakumbi, siya kubonisa eminye yemigaqo ephambili ngoncedo lwemizekelo ethile.
Ukuhamba ixesha elide kunye neeasethi
Emva kophando lwakho lobuchwephesha, ucinga ukuba isitokhwe se-XYZ siya kunyuka ngexabiso kwiiyure ezimbalwa ezizayo
Uyaqhubeka nokudlala "ukuthenga i-odolo" kunye nomthengisi wesitokhwe sakho, ngexabiso lentengiso le- $ 130.00
Inani lakho elipheleleyo kule ntengiselwano yi- $ 1000
Njengoko bekulindelwe, emva kweeyure ezimbalwa, ixabiso lezabelo ze-XYZ lenyuka laya kwi- $ 131.30
Ukunyuka kwexabiso ngoku kuyi-1%.
Kwisibonda sakho se- $ 1000, ngoku unenzuzo eyi- $ 10
Ubeka iodolo yokuthengisa kwaye ukhiye kwiinzuzo.
Nangona inzuzo ye-1% isenokungabonakali njengesixa esibalulekileyo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abathengisi bosuku bahlala bethengisa ngemali eninzi. Kwaye le nzuzo yenziwa ngeeyure nje ezimbalwa. Ngapha koko, ukuba basebenzise umyinge we-10x, isihloko esiza kusigubungela kungekudala, le nzuzo inokuphindaphindwa ukusuka kwi- $ 10 ukuya kwi- $ 100.
Ukuhamba ngokufutshane kunye neeasethi
Uphando lwakho lubonakalisile ukuba amaxabiso ezabelo ze-ABC zibangelwe kukuhla kwexabiso kwiiyure ezizayo
Ucela umthengisi ukuba abeke iodolo yokuthengisa kwixabiso lentengiso le- $ 5
Uthengisa izabelo ezixabisa $ 2000
Ukuba ixabiso le-ABC lehla laya kwi-4.50 yeedola, uya kuncipha nge-1%.
Kwisibonda se- $ 2000, inzuzo yakho kolu rhwebo yi- $ 20
Ubeka i-oda yokuthenga kwaye uvale urhwebo ukutshixa kule nzuzo
Oku kubonisa ukuba inzuzo yenzuzo inokubakho ngokufutshane kunye nokulandelelana okude- leyo ingumbono obalulekileyo xa ufunda ukuthengisa kwemini!
Imiyalelo yoRhwebo yoSuku
Ngaphandle kokuthenga iodolo kunye nokuthengisa iiodolo, kukho iiodolo ezongezelelekileyo onokunxibelelana nazo nomrhwebi. Kwimizekelo esiyinike apha ngasentla, kunokubonakala ngathi xa kuqala kuthengiwe okanye kuthengiswa iodolo, umrhwebi ulinda de kutshintshe imakethi aze abeke i-odolo yokuvala ngesandla.
Nangona kunjalo, abathengisi bemini abalindi ukuba babone ukuba intengiso ihamba njani kwaye igcina urhwebo luvulekile kwi-asethi. Endaweni yokuba bashiye imiyalelo okanye ezinye iiodolo kumrhwebi xa uza kuthengisa okanye athenge. Xa uthengisa ngeendawo zokurhweba kwi-Intanethi, unokuseta le miyalelo ngokwakho, ke imiyalelo yakho iya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Kukho ii-odolo ezimbalwa ekufuneka uziqhelanise noku malunga noku xa ufunda ukuthengisa kwemini- esixoxa ngazo ngeenkcukacha ezingezantsi.
Ii-odolo zokumisa-ukulahleka yeyona nto ifunekayo kwi- urhwebo lwesitokhwe ukukunceda ukunciphisa iilahleko zakho. Ziyilelwe ukunciphisa umda kwilahleko yomrhwebi ukuba utyalo-mali luthathe ithuba elingathandekiyo. Umyalelo wokulahleka kokuyeka uvala urhwebo xa ixabiso lihla ukuya kwindawo ethile, ukunciphisa nawuphi na umonakalo.
Ukuseta i-odolo yokulahleka kwe-5% ngaphantsi kwexabiso lokuthenga, umzekelo, ukunciphisa umda wakho kwi-5%.
Komnye umzekelo, yithi uthenge i-XYZ kwi-10 yeedola.
Ngokukhawuleza emva kolu rhwebo, ubeka i-odolo yokulahleka kwe- $ 8.
Kwimeko apho ixabiso lesitokhwe liwela ngaphantsi kwe- $ 8, izabelo zakho ziya kuthengiswa kwixabiso lesabelo elixhaphakileyo.
Ayinamsebenzi ukuba ixabiso lehle ngakumbi, njengoko iilahleko zakho ziya kubanjiswa kwilahleko yokumisa oyimisileyo. Nangona kunjalo, kwiimarike zokuthengisa zosuku, akusoloko kuqinisekiswa ukuba i-odolo yokuyeka ilahleko iya kusebenza. Ngokuchasene noko, kukho ithuba lokuba ixabiso aliyi kuthelekiswa ngomnye umrhwebi.
Namhlanje, iindawo ezininzi zokurhweba kunye nabarhwebi banikezela nge-odolo yokuyeka ilahleko. Ngokwenza njalo, umrhwebi unikezela ngesiqinisekiso sokuba urhwebo lwakho luya kukhutshwa kwixabiso lokulahleka okumisileyo. Le nkonzo, nangona kunjalo, iza kuza nemirhumo ephezulu kancinci.
Thatha uMyalelo weNzuzo
Kuthengiso losuku, izicwangciso zokuphuma azisebenzi kuphela kwilahleko kodwa nakwinzuzo ngokunjalo. Ufuna ukuthengisa izikhundla zakho xa 'ziluhlaza', ke awunakukhathazeka malunga nokuphulukana neenzuzo zakho.
Masithi ubona ipateni enyukayo kwisitokhwe kwaye uthathe isigqibo sokuvula indawo ende.
Ukuba ulindele ukonyuka nge-10% kwinqanaba langoku.
Kule meko, ubeka i-odolo yenzuzo ye-10% ephezulu kunexabiso lentengiso.
Ukuba oku kuyenzeka, inzuzo yakho iya kuvalwa ngokuzenzekelayo kwinzuzo ye-10%
Ngokuzenzekelayo iziphumo zakho zoRhwebo loSuku
Zombini ii-odolo zokuyeka kunye nengeniso zenza ukuba umrhwebi akwazi ukwenza urhwebo ngendlela ezenzekelayo. Ngezi zinto zikhona, awunakukhathazeka malunga nokujonga ngenyameko i-asethi yonke imizuzu yomhla.
Oku kuya kukunceda ukuba uphephe 'ukuthelekelela okwesibini' izigqibo zakho, njengakwilizwe lezorhwebo, abantu bahlala bekufumanisa kunzima ukwenza umgca. Ngokulahleka kokuyeka kunye nokuthatha inzuzo, i-risk-to-reward ichazwe ngokucacileyo, kwaye uyazi ukuba ulindele ntoni nangaphambi kokuba urhwebo luvale.
Le miyalelo idlala indima ebalulekileyo ekwenzeni ukurhweba ngemini kube yimpumelelo.
Funda ukuThengiswa koSuku kunye noNcedo
Ngamagama alula, amandla okukwazi ukurhweba indawo enkulu ngenani elincinci lenkunzi. Njengabahwebi bemini benza utyalo-mali oluninzi ngosuku, udinga inkxaso yebhanki enkulu. Ngokusebenzisa amandla, uboleka imali kumthengisi wakho.
Kwithiyori, ubungakanani abuchaphazeli inzuzo yakho okanye ilahleko- ubuncinci ngokweepesenti. Endaweni yoko kunciphisa isixa semali ekufuneka sibekiwe ngorhwebo.
Umzekelo, umrhwebi ofuna ukuthenga izabelo ezili-100 zesitokhwe kwi-20 yeedola ngesabelo ngasinye kuya kufuneka akhuphe i- $ 2,000. Kodwa, ngogunyaziso lwe-10x, iidola ezingama-200 nje ziyafuneka ngaphambili.
Kananjalo, umrhwebi oqeqeshiweyo wosuku ujonga amandla njenge ithuba.
Ukuxhamla kunokuba yinto edidekayo yokuqonda xa ufunda ukuthengisa kwemini, ke sichaze umzekelo ongezantsi.
Masithi ixabiso lempahla xa kuvulwa ingu- $ 5000
Endaweni yokuhlawula isixa esipheleleyo, unokufaka isicelo somgangatho we-5: 1
Oku kuthetha ukuba yonke i-5 yeedola kwixabiso langempela, kwaye kuya kufuneka utyale kuphela i-1 yedola eyinkunzi
Ke, kwesi sikhundla, ufuna kuphela i-1000 yeedola ukuze usivule.
Uyakwenza inzuzo kwi lonke urhwebo, kwaye ayisiyiyo kuphela into oyityalileyo. Inzuzo enobulumko, uxhathiso lusebenza kuwe. Nangona kunjalo, ukuba uyalahleka, ilahleko yakho iya kwandiswa.
Umngcipheko woRhwebo lweSuku kunye noNcedo
Xa uthengisa ngokunyusa, kufuneka uqaphele inkqubo yomda. Kumzekelo ongentla, ukwazile ukuvula iodolo kwi-1000 yeedola nangona isikhundla sifuna i $ 5000. Uyenzile le nto usebenzisa amandla we-5: 1.
Xa uvula urhwebo, ibhalansi ye-akhawunti yakho iphambili iya kuba ichithwe i- $ 1000 kwaye emva koko wafudukela kwiakhawunti yakho yomda. Ngamagama alula, lo mda unokuqwalaselwa njengedipozithi engabuyiswayo. Ukuba urhwebo luchasene nawe, uya kulahla le mali.
Kule meko, uxinzelelo lwaluyi-5: 1, oko kuthetha ukuba umda wakho uku-20%. Ukuba imarike ibinokuchasana nawe nge-20%, uya kuphulukana nomgama oyi- $ 1000.
Kuxhomekeka kubungakanani besixokelelwano esisetyenzisiweyo, esi sixa somda siya kwahluka. Ukuba ukhethe i-10x, uya kucelwa ukuba wabele i-10% yemida yakho kwaye ulahlekelwe yiyo kuphela. Imida yokunyusa ihlala ilawulwa zizithintelo ezibekwe lilizwe ohlala kulo, kunye nodidi oluthile lweasethi onqwenela ukurhweba.
Imirhumo kunye neeKomishini kwiNtengiso yoSuku
Ukuthengisa ngemini kuhlala kufuna ukuba ubeke urhwebo ngomthengisi. Kananjalo, iisayithi zabarhwebi zikubiza iifizi ezithile kunye neekhomishini zokuqhuba urhwebo olwenzileyo.
Ngokubanzi, kukho iifizi ezimbini, ngakumbi, kuya kufuneka uqaphele.
sasaza ichazwa njengomahluko phakathi kwebhidi kunye nokubuza amaxabiso asethi. Yiyo le ekhusela inzuzo kumrhwebi- ngaphandle kwendlela i-asethi ehamba ngayo kwixesha elifutshane.
Ekuthengiseni kwemini, ukusasazeka kuchazwa nguiipipi"Xa usebenzisa iiCFD kunye" namanqaku "kwi ukusasaza ukubheja. Oku kunokuba nokudideka, endaweni yoko, ukusasazeka ngokubanzi kuvavanywa ngokweepesenti, ekulula ukubala. Njalo kufuneka uqwalasele ukusasazeka xa uthengisa ngenxa yokuba inzuzo yakho ibalwa kuphela emva kokuba inzuzo yakho igubungele.
Ixabiso lokuthenga lempahla yeXYZ yi100.00
Ixabiso lokuthengisa kwi-stock efanayo ye-XYZ yi-100.50
Umahluko wepesenti okanye ukusasazeka kuza kwi-0.5%
Ukuba umrhwebi ubiza i-XYZ, kwaye ahlawule i- $ 100.50, unokucela i- $ 100.00 kuphela
Kule meko, kuya kufuneka wenze inzuzo ubuncinci i-0.5% ukuze uphule.
Nasiphi na isixa esingaphaya koku siyakubalwa njengenzuzo.
Ekuthengiseni kwemini, ukusasazeka kunokuba lula ukuba ngumhlali wakho. Njengabarhwebi uninzi lwabo lukhangela utshintsho oluncinci, ukusasazeka kunokusebenzisa isibonelelo esincinci onokukwazi ukusenza kurhwebo. Ke ngoko kubalulekile ukuba ukhethe indawo yokurhweba ebonelela ngokusasazeka okuqinileyo.
Kunye nokusasazeka, abarhwebi kufuneka bahlawule iikhomishini kumrhwebi. Nangona kunjalo, namhlanje, unokufumana amaqonga anikezela urhwebo "lwe-zero-commission". Kula maqonga, kuya kufuneka ujolise ekuqinisekiseni ukuba ukusasazeka akuyiginyi inzuzo yakho-njengoko unokufumanisa ukuba kuphakame kancinci ukuphikisana nekhomishini ye-0%.
Iikomishini zomrhwebi zikwipesenti ukuze isixa eso sihluka ngokuxhomekeka kubungakanani borhwebo lwakho. Kwakhona, khumbula ukuba uya kuhlawuliswa iikhomishini kuzo zombini ukuthenga nokuthengisa ukuphela korhwebo.
Funda kuRhwebo lweSuku-Abarhwebi abaGqwesileyo be2021
Ke ngoku ekubeni sigubungele ezona ngongoma zibalulekileyo ekufuneka uzazi xa ufunda urhwebo usuku, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ukuba yeyiphi indawo onqwenela ukuyisebenzisa.
Ukukunceda apha endleleni, apha ngezantsi uza kufumana ukhetho lwabathengisi bemini abalungileyo be2021.
Ngemvume yokulawula kumazwekazi amahlanu, i-AVATrade ikunika ukufikelela kumawaka ezixhobo, kubandakanya i-forex kunye ne-cryptocurrensets. Ngomnye woovulindlela beewebhusayithi zokurhweba kwaye uyaqhubeka nokulawula ishishini. Kwabaqalayo, izikhokelo ezizodwa zemfundo ziya kukunceda uqonde ukuthengisa kwemini kwaye ufunde kwizicwangciso ezimiselweyo.
I-Capital.com yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB elawulwa yi-intanethi ye-intanethi enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Zonke ziluhlobo lwe-CFDs - oku kubandakanya izitokhwe, i-indices kunye nezinto ezithengiswayo. Izibonelelo zoxhaso nazo ziyafumaneka - zihambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Ukuthengisa kwemini ngokuqinisekileyo kuza nomngcipheko omkhulu. Ufuna ukubamba okuthile kwizigqibo zakho kwaye ukulungele ukujongana neziphumo. Kubaqalayo, isitshixo kukufunda kangangoko unako kwaye uzilungiselele ukungalindeleki.
Siyathemba ukuba isikhokelo sethu seshishini lokufunda sikunike ukujonga ngokubanzi oko kuthatha ukuba urhwebe iiasethi zemihla ngemihla. Ukuba kuyakonwabisa, kukuwe ukuba ufumane ulwazi ngakumbi. Xa uxhobile ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nezakhono, ukufumana isisa ngokuthengisa ngemini ngokuqinisekileyo kunokwenzeka.
Zingaphi iiyure onokuzigcina zivulekile kwindawo yokuthengisa yosuku?
Abathengisi bemini bavula kwaye bavale urhwebo kwangolo suku lunye. Oku kuthetha ukuba bagcina urhwebo luvulekile kuphela iiyure ezimbalwa. Ukuba iasethi iyenyuka, abathengisi abanako ukushiya urhwebo luvulekile ngaphezulu kwemizuzwana embalwa okanye imizuzu.
Yimalini onokuyifumana ngokuthengisa ngemini?
Ingeniso yomrhwebi wosuku ixhomekeke ngokupheleleyo kumrhwebi, kunye nezinto ezinjengeekhomishini kunye nokhuthazo.
Kuthetha ntoni ukusasazeka kwintengiso yosuku?
Ukusasazeka kubalwa njengomahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa kwexabiso lesitokhwe. Yintlawulo ebekwa ngabarhwebi ukwenza imali. Ukuqina kokunwenwa kukukhona, inzuzo oyenzayo ininzi.
Ngaba iindawo zokurhweba ngemini zilawulwa?
Ewe, zonke iindlela zokurhweba ngemini zilawulwa. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iindawo ezikhoyo. Kananjalo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukhetha iqonga elilawulwayo elilawulwa ngumnikezeli welayisensi owaziwayo. Zonke iisayithi zomthengisi esizikhankanyileyo kwesi sikhokelo zilawulwa yimizimba enjalo.
Yimalini indlela anokuthengisa ngayo umrhwebi wosuku?
Izinto ezahlukeneyo zichonga umda wobungakanani, indawo, isixhobo sezezimali, kunye nemigaqo-nkqubo yomthengisi. Amazwe ahlukeneyo anemilinganiselo eyahlukeneyo ekhoyo yeeasethi ezahlukeneyo. Umzekelo, i-UK ine-30: 1 umda kwiimali, i-2: 1 ye-crypto, kunye ne-20: 1 ye-exotic.
Ndingayifaka njani imali kwintengiso yemihla ngemihla?